Madaxweynaha Somaliland Oo Khudbadii xuska 18 May 2017 Kaga Hadlay Arrimo Dhawr Ah
Thursday May 18, 2017 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO YOUR FRIEND
Hargeysa-(SLNTV)-Madaxweynaha Somaliland ayaa xuska sanad guuraada 26aad ee dib u la soo noqoshada madax banaanida Somaliland ka hadlay, waxaanu madaxweynuhu khudbad dheer oo uu hada ka jeediyey xarunta mamdaxtooyada kaga hadlay arrimo badan oo khuseeya mandaqada.
Maanta waa maalin weyn, waa maalintii aynu la soo noqonney madax- bannaanideenii murkacatay 1-dii July 1960. Waa maalintii hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo siyaasadda ee ummaddani, ay go'aamiyeen in ay dib u saxaan taladii ay il-duufeen soddon sanno ka hor, 18-kii May 1991.
Taasi ma'aha arrin ku timi sahalo, balse waa mid ku timi isku-tashi, tacab, tawfiiq, talo wadaag iyo ALLE taban-taabadii.
Aniga oo madashan iyo munaasibaddan qaran ka faa'iidaysanaya, waxaan ugu baaqayaa dalalka Midowga Yurub, Maraykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Midowga Africa, Jaamacadda Carabta, Dawladaha ku bohoobay Urur Goboleedka IGAD, in ay garwaaqsadaan qadiyadda Qarannimada Somaliland, isla markaana ixtiraamaan xaqa aaya ka tashiga shacbigayga.
Soomaalidu waxay ku maahmaada:"Ninka aan waxa soo socda garani, waxa joogna ma garto".
1.Dhoofka Xoolaha Nool oo laf-dhabar u ahaa dhaqaalaheena, isla markaana ahaa waxa ugu weyn ee aynu dhoofinno, oo la joojiyey. Taasi waxay keentay in aynu ku weyno lacagtii adkayd ee aynu ka heli jirnay, oo aan ka yarayn Saddex Boqol oo Milyan oo Dollar sannadkii.
2.Lacagtii inooga iman jirtay xoogeenna dhoofsan (Qurba-jooga), oo sababo kala duwan darteed u yaraatay.
3.Sannad walba, waxaynu lacag adag oo aan ka yarayn dhawr boqol oo milyan ku soo iibsannaa Qaadka, oo aan wax qiimo ah inoogu fadhiyin.
4.Ganacsigeennii iyo wax kala iibsigeennii, waxaynu ku salaynay lacag aynaan lahayn, mid kaash ah iyo mid lagu isticmaalo adeegga tilifoonnada ee casriga ah (ZAAD iyo E-dahab), taas oo meesha ka saartay isticmaalkii cumladdeenii sharciga ahayd.
5.Waxa intaa dheer, innaga oo aan wax soo saar iyo tacab kale u feydan, iska daa waxaynu dunida u dhoofinnee, ab iyo isir khudraddii aynu beeran jirnay, ee dhulkeenna kala soo bixi jirnay, waxaynu maanta ka soo iibsannaa dalalka aynu deriska nahay.
Abaartaasi markii ay dhacday, waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban culimo, ganacsato iyo mas'uuliyiin xukuumaddayda ka mid ah, si ay gurmad iyo gargaar ula gaadhaan dadka tabaaloobay, kuwaas oo illaa hadda shaqaynaya.
Waxaan shaki ku jirin in guddidaasi dedaal weyn ay samaysay, ILAAHAYNA sabab uga dhigay in ay badbaadiyaan nafo badan, oo baad iyo biyo la'aan u dhiman lahaa.
Waxaan caddaynayaa in Xukuumaddaydu ay gacan weyn ka geysatay gurmadkii abaaraha, isla markaan gundhig u ahayd hawlaha gargaarka. Hore ayaa loo yidhi:"Nin adhigiisii bahal galay, ayaan darane mooyee, orod darane lama yidhaahdo".
EEBE mahaddii, roobkii waa inoo da'ay, abaartiina wey jabtay. Hase yeeshee, waxay ummad ahaan ina dhaxalsiisay, dhibaato weyn oo u baahan gurmad deg deg ah, iyo qorshe aynu kaga gaashaamanno, ama kaga hor-tagno abaaraha ina aafeeyey, ee inagu soo noqnoqnaya.
1.In lagu celiyo dadkii ka barakacay deegaankoodii.
2.In loo iibiyo xoolo nool dadka caydhoobay, gaar ahaan kuwa ugu jilicsan.
3.In la qodo ceelal biyood, iyo balliyo biyaha socda lagu qabto.
4.In la xidho seerayaal badan oo lagu baxsado xilliga jiilaalka.
5.In dadka aan awoodi karin laga caawiyo qodaalka beeraha xilli roobaadkan.
1.In aynu midayno maskaxdeenna, muruqeenna iyo maalkeenna.
2.In aynu kor u qaadno wada jirkeenna, iyo waddan jacaylkeenna, isla markaana aynu ubadkeenna ku ababino arrimahaa.
3.In aynu wax weyn ka beddello qaabkii aynu xoolaha u dhaqan jirnay, ee aynu ka dhaxalnay awoowayaasheen.
4.In aynu xoog saarno wax soo saarka beeraha iyo kalluunka.